Mpiasa mpifindramonina Nepali nody rehefa nandany 40 taona tany amin’ny rafi-pamonjana Indiana · Global Voices teny Malagasy
Niainga tao amin'ny fonjan'i Kolkata hatrao am-pofoan-dreniny, efapolo taona aoriana
Voadika ny 14 Avrily 2021 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Nederlands, Ελληνικά, Italiano, Português, Français, Español, বাংলা, English
Durga Prasad Timsina miaraka amin'ny reniny. Pikantsary avy amin'ny lahatsary navoakan'i OnlineKhabar tao amin'ny YouTube.
Navoaka tao amin'ny trano fanitsiana Dum Dum tao Kolkata, India, i Durga Prasad Timsina, izay fantatra ihany koa hoe Dipak Jaisi avy ao Nepal, 40 taona taorian'ny nampidirana azy am-ponja. Nandany 40 taona mahery tany amin'ireo fonja isankarazany ao India tsy nisy fitsarana tamin'ny heloka tsy nisy porofo matotra sady nolazainy fa tsy nataony ity lehilahy 61 taona ity. Noafahana araka ny nampanantenaina izy ary nampihaonina tamin'ny fianakaviany tao Lumbak, any amin'ny faritra atsinanan'i Nepal tamin'ny 21 marsa.
Roapolo taona i Timsina raha nifindra hitady asa tao Darjeeling, India. Nosamborina izy tamin'ny taona 1980 rehefa nisy lehilahy iray tao an-toerana, Naina Ghale, nitory an'i Timsina ho namono ny vadiny. Na izany aza tsy notohizan'i Ghale intsony ny raharaha.
Araka ny antsafa video nataon'ny media Nepali Setopati, nilaza i Timsina, “Nilazana aho fa hahazo asa ao amin'ny Tafika Indiana saingy taty aoriana dia nampaneken-dry zareo amin'ny fiampangana diso ho namono olona, saingy tsy manan-tsiny [tsy meloka] aho.”
Nilaza ny fianakaviana fa maty i Timsina nandritra ny herisetran'ny hetsika Gorkhaland tamin'ny taompolo 1980s. Tsy nitady azy mihitsy ry zareo. Tamin'ny Novambra 2020 hitan-dry zareo fa velona izy ary any am-ponja. Taorian'izany ry zareo no niezaka nitady fanohanana hampody azy.
Tamin'ny antsafa video nifanaovana tamin'ny media Nepali iray, nilaza n renin'i Timsina, “Faly ihany aho ny farany fa niverina teto an-tanako izy. Nifarana ihany ny fikarohako ny zanako; nisy ihany ny fotoana niheverako fa tsy hiverina intsony izy.”
Olona niaro ny fahalalahany
Naneho ny hafaliany tamin'ny fahatongavan'i Timsina nody sy ny ahiahiny momba ity raharaha ity ny mpikirakira media sosialy sasany.
Mpanao gazety Nepaley Dhruba H. Adhikari:
Navoaka ny fonja i Durga Prasad Timsina, teratany Nepaley, noho ny didim-pitsarana tao Calcutta, ka nitondra sento ho an'ny vahoakan'i Nepal.
Mendrika ny hanaovana famotopotorana feno—sy onitra ny raharaha—satria nigadra 40 taona TSY MISY FITSARANA izy. @ Narendramodi @MEAIndia
Naneho hevitra ireo mpikirakira ny fantsona YouTube Setopati :
Saripikan'ny fanehoan-kevitra vitsivitsy nataon'ny mpikirakira YouTube tao amin'ny media Nepali.
Madan Ojha: afaka 40 taona, niala ny fonja Kolkata nankeo am-pofoan-dreniny. Tokony handoa onitra ny governemantan'i India! Olona tsara foana no voafandrika! Tokony hanandratra ny feony ny tsirairay (manohitra ity tsy rariny ity)!
Roshan Khadka: tokony handoa onitra ny governemanta India!
Sushil Rana: Misaotra betsaka an'ireo Indiana sy Nepaley rehetra izay niasa andro aman'alina tamin'ny famotsorana azy ary nanampy azy hiaina fiainana malalaka na dia efa antitra aza izy. Misaotra an'i Setopati tamin'ny nanaovany fanadihadiana tsara toy izany.
Olona fototra nahafahana namotsotra an'i Timsinas i Radheshyam Das. Samy niara-notazonina tao amin'ny Trano fanitsiana foibe ao Dum Dum tany Kolkata ry zareo. Fantatr'i Das ny momba an'i Timsina raha mbola tany am-ponja izy, ary rehefa avy nahavita sazy 10 taona tao amin'io fonja io, dia nanolo-tena hiady ho amin'ny famotsorana an'i Timsina izy.
Nampahafantatra tamin'ny West Bengal Radio Club-Ham Radio momba ny raharaha Timsina i Das. Niely vetivety ny vaovao, ary mpisolovava maro no tonga nanohana an'i Timasina sy nangataka ny famotsorana azy. Mpisolovava iray, Hira Sinha, miaraka amin'ny mpisolovava hafa, no nanolo-tena hiasa ho azy, niaraka tamin'ny fanampian'ny governemanta Nepaley sy Indiana sy ny vahoaka, nahomby tamin'ny famotsorana azy amin'ny fandoavana solofonja i Timsina. Mbola tsy maintsy ambaran'ny Fitsarana Avo ao India ny didim-pitsarana farany momba ity raharaha ity.
Mbola lava ny lalana mankany amin'ny rariny
Taorian'ny sazy naharitra ela sy henjana tany am-ponja, dia toa tsy milamina ara-batana sy ara-tsaina i Timsina. Tamin'ny resadresaka vao haingana tamin'ny media Nepaley, zara raha nahatadidy ny fahatsiarovany izy, ary tsy afaka niteny tsara koa.
Nandany efapolo taona sarobidy tany an-tranomaizina izy. Toa marefo be izy izao ka tsy afaka mandeha akory raha tsy misy mpihazona. Niverina nody izy rehefa nandany ny ampahatelon'ny fiainany tany am-ponja, naratra ara-tsaina ary tsy nanana finiavana hiaina fiainana misy dikany.
Nomen'ny governemantan'i Nepal zom-pirenena i Timsina tamin'ny nahatongavany, ary nanapa-kevitra ihany koa ny hanohana azy amin'ny fandaniana ara-pitsaboana. Saingy tsy ampy amin'ny fahombiazan'ny famerenana azy amin'ny laoniny ny ezaka toy izany.
Ny fahasahiranana ara-bola no sakana lehibe mahatonga ny fiverenana hiaina ara-piarahamonina ho sarotra ho an'i Timsina. Namoy ny rainy izy tamin'izy tanora, ary 86 taona manana fahasembanana ny reniny. Miaina ao anaty fahasahiranana ara-toekarena koa ny fianakaviany.
Miandry fanamaivanana ny fianakavian'i Timsinas, satria ny Fitsarana Avo Kolkata dia nandidy ny governemantan'i Bengal Andrefana mba hanome onitra azy. Na izany aza, ho sarotra ho an'ny fianakaviany ny miroso amin'ny fomba ofisialy hitaky ny onitra nefa tsy misy fanampiana.
Ivotoerana momba ny Fifindra-monina any Kathmandu (Niyama). Ireo mpangataka visa maniry handeha any ivelany, Nepal. Sary Marcel Crozet/OIT avy amin'ny Flickr. CC BY-NC-ND 2.0.
Fa maninona i Nepal no tsy mahavita miaro ireo mpiasa mpifindramonina ao aminy?
Tsy i Timsina irery no iharan'izany. Misy olona an'arivony maro izay mandalo fahoriana toy izany. Mifindramonina ny olona noho ny fahantrana sy ny tsy fahampian'ny hirika ary India no iray amin'ireo toerana lehibe fifindra-monina arak'asa ho an'ny mpiasa Nepaley. Mifampizara sisintany ireo firenena ireo, ary tsy mila pasipaoro, visa, na fahazoan-dàlana hifindra monina hiasa any India ny mpiasa avy any Nepal. Mandray ny iray amin'ireo fandefasam-bola be indrindra avy any India i Nepal noho ireo mpiasampifindra monina ireo.
Na dia miantoka ny fiarovana ireo mpiasa mpifindra monina aza ny Lalàna momba ny Asa any Ivelany 2007, dia tsy ampy ny fiheverana ny fampiharana azy hahomby. Ny tsy fananana fahazoan-dàlana hiasa dia midika fa tsy manana taratasy ara-dalàna ny mpifindra monina ary miteraka risika marobe amin'ireo mpiasa Nepaley any India izany ; tandindomin-doza izy ireo noho ny fanolanana, fanararaotana na iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Mbola olana lehibe, tsy ho an'ireo mpiasa Nepaley any India ihany ny fiarovana sy ny fepetra ho an'ny mpiasa mpifindra monina. Olana lehibe ary matetika voatsikera ny politikan'ny governemanta Nepaley.
Betsaka ny fianakaviana Nepaley mbola mamoy ny havany izay lasa niasa tany ivelany. Vao tsy ela akory izay, ny alahady 4 aprily, naverina tany Nepal avy any Malezia, iray amin'ireo toerana lehibe fifindra-monina arak'asa ny vatana mangatsiakan'ireo mpiasa mpifindra monina miisa 12, izay tanora ny ankamaroan'izy ireo. Mamintina ny zava-misy ankehitriny sy ny fanamby ho an'ireo mpiasa mpifindra monina Nepaley ny tranga tahaka izao.